Klopp oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Wijnaldum inuu ka tagayo Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 11 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool aayaa barri la ciyaari doonta kulankeeda koowaad xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League, naadiga Leeds United, kulankan ayaana ka dhici doono garoonka Anfield.
Macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa maanta oo Jimco ah ka soo muuqday shir jaraa’id markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan cusub, kahor kulanka Leeds United.
Jürgen Klopp ayaa ka hadlay arrimo badan oo muhiim ah ee la xiriira ciyaarta berri, wuxuuna hadalkiisa si gaar ah ugu soo qaatay suuqa kala iibsiga qorshayaasha Liverpool ay ku xoojinayso safkeed inta ka dhiman suuqan.
Klopp ayaa ka hadlay wararka Georginio Wijnaldum la xiriirinaya inuu ka tagayo Liverpool si uu ugu biiro kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in wax walba ay hagaagsan yihiin, mustaqbalka Georginio Wijnaldum wuxuu ku socdaa wadada saxda ah, waxaan leenahay xiriir aad u wanaagsan”.
“Waxaan rajeynayaa inaan helo eray gaar ah oo lagu joojiyo wararka xanta ah”.
Intaas kaddib Jürgen Klopp ayaa ka hadlay wararka la xiriirinaya Thiago Alcântara, wuxuuna yiri:
“Thiago Alcântara waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, in nalala xiriiriyo waa arrin aad u wanaagsan” ayuu yiri macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay sheegeen wargeysyada adduunka, Ronald Koeman tababaraha cusub ee kooxda Barcelona, ayaa muujiyey sida uu u doonayo inuu mar kale la shaqeeyo Wijnaldum, oo uu tababare ugu soo noqday muddadii uu joogay xulka qaranka Holland.